KernelCI: iyo Linux yekuyedza chimiro, ichave iri pasi pejasi reLF | Linux Vakapindwa muropa
KernelCI: iyo Linux yekuyedza chimiro, ichave iri pasi pejasi reLF
Iyo Linux Foundation akazivisa panguva yeOpen Source Summit Europe muLyon, France, iyo atora chirongwa chitsva pasi pejasi rake, chirongwa ichi "KernelCI". Zvinova chimiro iyo yakagadzirirwa kuita otomatiki kuyedzwa kweLinux kernel kuvaka maitiro.
KernelCI inova chirongwa pasi peLinux Foundation Nekuti kukura kweiyo kernel kwakanangidzirwa pa kernel.org, nepo kuyedzwa kuchisara kune kuedza kwevanogadzira uye mapurojekiti. Pakati pezvimwe zvinhu, yega yega muparidzi weLinux anoshanda neyake bvunzo lab, asi kuchinjana pakati pemapurojekiti ega ega kunoramba kuri kudiki.
Kunyangwe paine chibvumirano chakapararira chekuti zvimwe zvinoda kuitwa mukuyedzwa, mhedzisiro yacho haina kukwana uye kazhinji yakaparadzaniswa. Chikamu chechinetso ndechekuti manyorero eLinux anotaridzwa sei. Russell Currey, Linux kernel mushambadzi, achangobva kutsanangura:
Kusiyana neprojekti yakavakirwa chete paGitHub kana GitLab, apo chikumbiro chekudhonza chine ruzivo rwese rwunodiwa kusanganisa boka rekuchinja; email ine, iti, chigamba 7/10, haina mamiriro akadaro. Zvinotomboita kuti utaure kubva kuemail meseji inokuzivisa iwe kana akateedzana ematehwe akasanganiswa, akarambwa, kana kutsiviwa. Muzhinji, zvinyorwa zvematsamba zvinongova zvisina huwandu hwakaenzana hwemetadata sezvazvino mapurojekiti ekugamuchira nzvimbo uye izvi zvinoita kuti dambudziko rekubatanidza kuenderera rinyanye kuoma.
Imwe yemapurojekiti anogara achiedza zvakanyanya Linux kernel ndiyo chirongwa KernelCI. Sezvo zvakare se yakavakirwa otomatiki kuyedzwa yepamutemo Linux shanduro, inoparadzirwa sebasa rekushandira pamwe uye ine software yemahara. Iyo bvunzo dzakagadzirirwa kuona kuenderana neakawanda akasiyana mapuratifomu ehurdware.
Kana iyo bvunzo ikasangana nechikanganiso kana kudzoka, zvikanganiso zviripo, zvinotaurwa uye, kana zvichibvira, zvinogadziriswa. Linux yekuvandudza matunhu anowanzoedzwa, saka akawanda mabhugi anogona kugadziriswa vasati vapinda mune yepamutemo Linux kuburitswa.
"Ini ndinowanzo taura manzwiro andinoita nezve iyo Linux system, asi ndinofanira kubvuma kuti tinogona kunyange kugadzirisa nzira yatinoedza nayo kernel," anodaro Jim Zemlin, director weSiseko. “Kuyedza kwakagara kuri kuita kwakakamurwa uye kwepamusoro-pasi. Tinotarisira kuwedzera mhando, kugadzikana, uye kugadzikana kwenzvimbo yedu yekushandisa.
Sarudzo yeKernelCI inova yekubudirira mukati menzanga, sezvo vachitaura kuti:
"Takabva pane imwe nzvimbo pakanga paine zvishandiso zvishoma zvekuyedza kusvika pakuwanza mhinduro mumakore maviri apfuura," anodaro Kevin Hilman, Senior Kernel Nyanzvi kuBaylibre. "Isu tinoshandisa yakavhurika sosi software, asi isu hatitore yakavhurika sosi nzira yekuyedza," anowedzera.
Uye zvakare, kusiana kwekuyedza kwakafukunura miriwo yakawanda, kusvika padanho rekuti mamenenja ekuchengetedza kwenguva refu (LTS) anga asisiri echinyakare.
"KernelCI inovandudza nzira yedu uye yekutevera bug kugadzirisa"
Kwegore, KernelCI yakanga yaronga kuzove Linux Foundation chirongwa. Izvi zvakatora nguva yakareba kupfuura zvaitarisirwa. Asi ikozvino iyo Linux Foundation yakazivisa kuiswa kweKernelCI. Vatsigiri veProjekiti vanosanganisira BayLibre, Civil Infrastructure Platform, Collabora, Foundries.io, Google, Microsoft, uye Red Hat. Imba nyowani ichave nechokwadi chekusimudzira-kwenguva refu nekutenda kune yakakwana tekinoroji uye rutsigiro rwemari.
Nedanho iri, KernelCI ichawana mukana kune yakawanda yakawanda Hardware. Uye zvakare, chimiro chechigarire chichagadzirirwa manejimendi eprojekti uye mipiro kubva kuMunharaunda inofanirwa kuverengerwa Kugadzira zvivakwa zvepurojekiti nyowani zvinotora nguva, asi kufambira mberi kungangoitika mune isiri kure ramangwana.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve kuziviswa kweiyo Linux hwaro, unogona kuitarisa pa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KernelCI: iyo Linux yekuyedza chimiro, ichave iri pasi pejasi reLF
Graboid - iyo cryptojacking honye inopararira kuburikidza nemidziyo yeDocker
Nhau dzakanaka. Adobe ichaenderera ichipa masevhisi ayo muVenezuela